धर्म निरपेक्षताको मुद्दामा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
धर्म निरपेक्षताको मुद्दामा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
धर्म प्रचारको नाममा हाम्रो समाजमा निम्तिन लागेको समस्यामा गृहमन्त्रालयको सजकता देखेर आफूले जानेका कुरा यहां समक्ष जिकिर गरी यस समस्याको समाधानप्रति सबैको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो।
गएको हप्तामात्रको कुरा हो। म अस्पतालमा राउन्ड गर्दै थिएँ। एक जना क्यान्सर रोगी गोर्खेली दिदीको सिरानी छेउ बाइबल पसारिएको देख्दा अनौठो लाग्यो। सोधेँ, किन धर्म परिवर्तन गर्नुभएको ? उनले भनिन् , पहिले घरमा सबैजना सधैं विरामी मात्र पर्ने, यो धर्ममा लागेपछि अलि कम भएको छ। पछि उनको श्रीमान्‌लाई पनि सोधेँ। उनले पनि त्यही जिकिर गरे। मलाई भन्न मन थियो, अहिले त झनै मस्तिष्कमा क्यान्सर पलायो नि त। तर उनको अवस्थामा त्यो भनेर उनको मनोबल गिराउन मलाई मन लागेन।
पश्चिमी सभ्यताले बाइबल पढेर चिन्न नसकेको अध्यात्म बुद्ध धर्म ग्रन्थ र वेदमा खोज्दै जाने क्रममा आइतबार चर्च जान पनि छाडिसकेको छ। तर आफ्नो उद्गम स्थलबाट उछिट्टिएर अन्य अङ्गगमा फैलिएको क्यान्सर जस्तो यो धर्म आज अफ्रिका र एसियाका गरीब मुलुकहरुमा फैलिएको छ जहाँका भक्तालुहरु आइतबार इशुको गोस्पेल गाउनमा मस्त छन्।
अंग्रेजको उपनिवेष रहिसकेको भारतमा दुई प्रतिशत इशाइहरु हुनु त्यती आश्चर्यको कुरा नहोला। आज नेपालमा जे भइरहेको छ , त्यो भारतमा हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। वर्षौ पहिले मैले नेपाल टेलिभिजनमा एउटा वृत्तचित्र हेरेको थिएँ। भारतमा भइरहेको यही समस्याको सन्दर्भमा। त्यसमा विदेशी पादरीहरुले सामूहिक ब्याप्टिजम गराएका दृश्यहरु थिए। उनीहरु भन्दै थिए , हिन्दू भगवानहरु दैत्य हुन्। तिनीहरु मन्त्र फुक्छन्। अब तिमीहरु हिन्दू मन्दिर जान पाउँदैनौ। टिका लगाउन पाउँदैनौ। आदि इत्यादि। धर्म परिवर्तन गरेका नेपालीहरु दशैं सम्म मनाउँदैनन्।
अध्यात्म भनेको तरड.गीय चेतनाको स्थिति हो। धर्म भनेको भौतिक संसार र अध्यात्मलाई सन्तुलनमा राख्ने माध्यम हो। धर्मको काम शरीरमा चेतना भर्ने हो। पेटमा अन्न भर्ने होइन। तर अफसोस हाम्रो देवी देवताको पूजाले नभरिएको नेपालीको पेट इशुका पादरीहरुले भरिदिएपछि उनीहरुले धर्म परिवर्तन गर्नू शायद अस्वभाविक नहोला। मरेपछि शिवजीले कैलाशमा उठाउनुहोला भनेर भोकोपेट पशुपति अगाडि मागेर बस्नु पनि भएन।
कोठा भित्र सिरकमा ढुसी पस्यो भने समस्या त्यो कोठाको ओसलाई जान्छ। त्यसलाई हटाउन सिरकलाई घाममा सुकाउनु पर्छ। नेपालीको चेतनामा पलाएको इशाई धर्म पनि यो ढुसीभन्दा केही फरक छैन। हामीहरुको लागि धर्म मन्दिरका मूर्तिमा र तिनका सामुन्ने गरिने स्वार्थी प्रार्थनामा सिमित छ। के त्यी हो धर्मको अस्तित्व ? धर्मले मासु खानु नराम्रो भनेर सिकाउँछ। धर्मले च्याउ खानु नराम्रो भनेर सिकाउंछ। धर्मले रक्सी खानु नराम्रो भनेर सिकाउंछ। धर्मले सात्विक बन्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। धर्मले योग ज्ञान दिन्छ। धर्मले सृष्टि ज्ञान दिन्छ। धर्मले चेतनाको ज्ञान दिन्छ। तर इशाई धर्मले न योग ज्ञान दिन्छ न सृष्टि ज्ञान। उल्टो गाईको मासु खाने सभ्यता लाद्छ। गएका दुई शताब्दीमा इन्टरनेटले नेपाली चेतनामा पनि यही पाश्चात्य संस्कृतिको प्रदुषण भित्र्याइसकेको छ। अब यसमा इशाई धर्म परिवर्तनले यो प्रदुषणलाई अझ स्थायित्व मात्र दिंदैन , हाम्रो धरासाई संस्कार र संस्कृतिलाई अरु धक्का पुर्याउँछ।
माओवादी क्रान्ती पश्चात नेपालमा जातीय उत्थानका साथ साथ हिन्दु जातीय विभाजनले आक्रान्त पारेको हाम्रो समाजमा प्रचन्ड र बाबुराम जी जस्ता हिन्दु ब्राम्हण कुलमा जन्मिएर सामाजिक सम्मानका साथ हर्किनुभएका व्यक्तित्वबाट समाजले तल्लो जात भनेर हेलामा बांचिरहेका जनताको हकमा लड्नु र सामाजिक व्यवस्था उनीहरुको हकमा परिवर्तन गर्न खोज्नु सम्माननीय कुरा हो। तर यही तरंगको लहरमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नु विश्व भूराजनैतिक परिवेशमा उत्साहजनक भए पनि धार्मिक र सामाजिक परिवेशमा राष्ट्रको लागि घातक नै ठहर हुन्छ। यसले अधर्म मौलाउने डर हुन्छ जुन हाम्रो अगाडि भइनैरहेको छ।
दुई सय वर्ष भन्दा पनि अगावै पृथ्वीनारायण शाहले धपाएका पादरीहरु आज हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष भएपछि फेरि ढाडिएका छन्। अहिले नेपालको गाउँ गाउँमा र काठमाडौंको टोल टोलमा च्याउ उम्रेझैं चर्च उम्रिन थालेकाछन्। यही गतिमा नेपालमा इशाईहरु एक प्रतिशतबाट बढेर दश प्रतिशत पुग्न धेरै समय लाग्दैन।
इशाईहरु चर्चमा जसलाई शैतान अर्थात बिस्ट अफ रेभलेसन भनेर निन्दा गर्छन् त्यो पात्र अरु कोही नभई शिवजी हुन्। शिव शक्तिलाई माता पिता समान पूजा गर्दै आएको हाम्रो समाजले, यति ज्ञात भएको खण्डमा के आफनो घर आंगनमा पलाएका यी चर्चको उपस्थिति स्वीकार्न सक्छ ? तर यहां त सरकारी योगदामा चर्च बन्न थालेपछि पनि नेपालीको मौनता र राजनैतिक अकर्मन्यता यथावत छ।
हिन्दू भगवानका मन्दिरहरु विदेशमा स्थापना नभएका होइनन् र इशाईहरुले बुद्ध धर्म वा हिन्दू धर्ममा आफूलाई परिवर्तित नगरेका होइनन् तर यी परिवर्तन उनीहरुमा धनको प्रलोभनले नभई ज्ञानको तृष्णाले गराउँछ तथा उनीहरुलाई क्रिसमस मनाउन वा चर्चमा प्रवेश गर्न कसैले निषेध गरेको हुंदैन जुन् निषेध इशाई धर्म परिवर्तित नेपाली र भारतीय हिन्दूहरुमा इशाई पादरीहरुले लगाउंछन्। मैले माथि पनि व्यक्त गरिसकें , धर्म परिवर्तन गरेका नेपालीहरु दशैं सम्म मनाउँदैनन्।
त्यसैले हे गृहमन्त्री ज्यू , यो समस्यामा तपाईंको ध्यानाकर्षण भएको सुनेर यति जाहेर गर्ने चेष्टा गरेको हूँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर नारा लगाउन तम्सिने हामी नेपालीलाई अधर्मको यो ओसबाट उतार्न कल्की नै जन्मिनु पर्ने भए अर्कै कुरा हो तर हाम्रो लाचारीले यदि यो आकाश मुनी विष्णुले अवतरण गर्नु पर्यो भने यो संसारलाई धर्मयुद्ध थेग्न निकै हम्मे पर्नेछ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २९, २०७४, ०३:१७:३७